Gantaal Yemen ku dilay in ka badan 30 Soomaali ah oo doon saarnaa - BBC News Somali
Gantaal Yemen ku dilay in ka badan 30 Soomaali ah oo doon saarnaa
Lahaanshaha sawirka Ronald Grant
Image caption Mid ka mid ah dadkii ku dhaawacmay doonta gantaalka lagu dhuftay
Ugu yaraan 30 qaxooti Soomaaliyeed ah ayaa lagu soo warramayaa in lagu dilay xeebaha dalka Yemen ka dib markii uu gantaal ku habsaday doontii ay ku safrayeen.
Isbahaysiga ayaa gacanta ku hayo maamulka hawada dalka Yemen.
Wakaalada wararka ee Yemen ee Saba oo ay gacanta ku hayaaan fallaagada ayaa sheegtay in qaxootiga laga soo weeraray cirka, weerarkaa noocaasna ay geysan karaan isbahaysiga oo kali ah.
Sidoo kale mid ka mid ilaalada badda oo la yiraahdo Maxamed Alay ayaa wakaaladda wararka ee Reuters waxa uu u sheegay in diyaarad nooca qumaatiga u kaca oo ay qoryo ku rakiban yihiin ay weerarka geysatay.
Lama oga wali cidda ka dambeysay weerarka
Ilaa iyo hadda lama oga cidda weerarka gaysatay.
Yemen: Duqeyn lagu dilay rayid
UK oo kordhinaysa gargaarka ay siiso Yemen
MSF: Cisbitaalkena ayaa Yemen lagu duqeeyay